ဆီးချိုရောဂါ Archives - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများ သွားနှုတ်သင့် မနှုတ်သင့် ဒီနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်သလို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်အများစုကြောက်တတ်တာဟာလည်း သွားနှုတ်ရမှာကိုပါပဲ။ အကြောင်းက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေရင် အနာမကျက်တတ်ဘူး သိထားကြတာ တစ်ကြောင်း၊ အရပ်ထဲမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိရင် သွားမနှုတ်ရဘူး အချင်းချင်းပြောဆို သတင်းပေးနေကြတာတစ်ကြောင်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွားနှုတ်ရမှာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေဟာ…
သင်ဟာဆီးချို ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသူလား? ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ မကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာအလွန်တရာမြင့်မားလျက်ရှိပြီး ဆီးချို ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောက်စရာရောဂါများကိုခံစားနေရသူများလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးအစား ၁ နဲ့ ၂ ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အမျိုးအစား ၁ ကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေမှာအဖြစ်များပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုမှားယွင်းတာကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အမျိုးအစား ၂ ကတော့…
ဆီးချိုဆိုတာ ဒါမျိုးလား? ယနေ့ စနေနေ့မို့ ဆေးခန်းကို စောစောလာသော ဒေါက်တာစု တစ်ယောက် ဝင်လာသည်နှင့် မျက်မှန်းတန်းမိသော ပြနေကြလူနာတစ်ယောက်နှင့် ဘေးမှာခြေထောက်ပတ်တီးနှင့်လူနာတစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရသည် “အမ လာလာဝင်ခဲ့” “ဆရာမရေ ကျွန်မအမလေ တောကလာတာ ခုဆီးချိုတွေတက်နေလို့”…… လူနာကုတင်ပေါ်ရောက်၍ ဆီးချိုဖောက်ကြည့်လိုက်တော့ ၄၀၀ကျော်!လူနာ မပြောပေမဲ့…
အမြင်အာရုံကို ခြိမ်းခြောက်နေသော ဆီးချို ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များ သတိမမူမိသော ဆီးချို၏ နောက်ဆက်တွဲ မှာ မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါသည် မျက်စိအတွင်းရှိ သွေးကြောများကို ယောင်ယမ်းစေ၍ မျက်လုံးအိမ်အတွင်း မကောင်းသော အရည်များစု၍ အမြင်အာရုံထိခိုက်စေသည်။ အများစုမှာရောဂါအစတွင်ထူးခြားလက္ခဏာမပြပါ ၊ လက္ခဏာပြသော…